It is me. Ko Niknayman.: လက်တွေ့ သက်သေပြပါ။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ နအဖက အရင်ကတည်းက ဖမ်းထားတဲ့ သူတွေရော နောက်မှ ဖမ်းတဲ့သူတွေရော အားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ အကုန်လွှတ်ပေးပြီး သက်သေပြဖို့ လိုပါတယ်။ ဆက်လက်ဖမ်းတာတွေ လုံးဝဆက်မလုပ်ပြဖို့လိုပါတယ်။
ဒါမှသာ နအဖ အနေနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအကျိုးကို အမှန်တကယ်လုပ်ပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာ စတင်ယုံကြည်ရပါလိမ့်မယ်။
Posted by Ko Niknayman at 4:31 PM